” ဆန်ချို ယူနိုက်တက် အပြောင်းအရွေ့နဲ့ ပက်သက်ပြီး လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း မှာဘဲ ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေ သတင်းကောင်းကြားရဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုးရှား ပြောကြား “ – Sports Soccer News
” ဆန်ချို ယူနိုက်တက် အပြောင်းအရွေ့နဲ့ ပက်သက်ပြီး လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း မှာဘဲ ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေ သတင်းကောင်းကြားရဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုးရှား ပြောကြား “
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီး အသင်း 1 သင်း ဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ဒေါ့မွန် အသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူနိုင်ဘို့. ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် ဒေါ့မွန်နဲ့ ပြောင်းရွေ့ကြေးကို သဘောတူမှု မရရှိခဲ့လို့ မခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ 2020 2021 ဘောလုံးရာသီမှာတော့ ဆန်ချိုသည် ဒေါ့မွန်အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ 16 ဂိုးသွင်း၊ 20 ဂိုးဖန်တီးပြီး ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့ဘာတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဆန်ချို သည် ကြွက်သားဒဏ်ရာကြောင့်2လခန့် အနားယူခဲ့ရပါတယ်။ ဆန်ချို သည် ယူရို 2020 ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ကစားသမား 26 ယောက်စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ခရိုအေးရှားအသင်းကို 1 :0 ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ သူ့အနေနဲ့ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Manchester Evening News ကတော့ ဆန်ချို နဲ့ ပက်သက်ပြီး လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေ သတင်းကောင်းကြားရဖွယ် ရှိတယ်လို့ ဆိုးရှားက ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂျ အငျအားကွီး အသငျး 1 သငျး ဖွဈတဲ့ ယူနိုကျတကျ အသငျးသညျ ဒေါ့မှနျ အသငျးမှ အင်ျဂလနျကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆနျခြိုကို ချေါယူနိုငျဘို့. ဆကျလကျ လုပျဆောငျနဆေဲဖွဈတယျလို့ သိရဘာတယျ ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးသညျ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကလညျး ဆနျခြိုကိုချေါယူဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပမေယျ့ ဒေါ့မှနျနဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကို သဘောတူမှု မရရှိခဲ့လို့ မချေါယူနိုငျခဲ့ပါဘူး။ 2020 2021 ဘောလုံးရာသီမှာတော့ ဆနျခြိုသညျ ဒေါ့မှနျအသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ 16 ဂိုးသှငျး၊ 20 ဂိုးဖနျတီးပွီး ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနိုငျခဲ့ဘာတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဆနျခြို သညျ ကွှကျသားဒဏျရာကွောငျ့2လခနျ့ အနားယူခဲ့ရပါတယျ။ ဆနျခြို သညျ ယူရို 2020 ပွိုငျပှဲဝငျနတေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ကစားသမား 26 ယောကျစာရငျးမှာ ရှေးခယျြခံထားရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ ခရိုအေးရှားအသငျးကို 1 :0 ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူခဲ့တဲ့ပှဲစဉျမှာတော့ သူ့အနနေဲ့ မပါဝငျနိုငျခဲ့ပါဘူး။
Manchester Evening News ကတော့ ဆနျခြို နဲ့ ပကျသကျပွီး လာမယျ့ရကျပိုငျးအတှငျး ယူနိုကျတကျ ပရိတျသတျတှေ သတငျးကောငျးကွားရဖှယျ ရှိတယျလို့ ဆိုးရှားက ပွောကွားခဲ့တာ တှရေ့ဘာတယျ ။
အဘေရာဟမျအတှကျ လာကာဇကျတီနဲ့ အနျကီတီရကျတို့ကို ရငျးဖို့လိုအပျနတေဲ့ အာဆငျနယျ
အခြိနျစောပွီးသာတီထှငျခဲ့ရငျ သိပျကောငျးမှာပဲလို့ တှေးမိလောကျမယျ့ အသုံးဝငျလှနျးတဲ့ တီထှငျမှုမြား